Zimbabwe at the Paralympics - Wikipedia
Zimbabweans have won a total of 2 gold medals, 9 silver, and 6 bronze. The country's most successful year, by far, was 1980, when Zimbabweans won 8 silver medals and 4 bronze - all but two won by Sandra James and Eileen Robertson, across events in several sports. Zimbabwe's first gold medal was won by Elliot Mujaji in 2000, in the 100m sprint (T46 category). Mujaji won Zimbabwe's second (and most recent) Paralympic gold medal in the same event four years later.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimbabwe_at_the_Paralympics&oldid=753942612"
This page was last edited on 9 December 2016, at 23:30.